Himalaya Dainik » यी युवतीले किन गरिन् कुकुरसँग धुमधाम विबाह ?
तपाईले कहिल्यै कुकुरसँग विबाह गर्ने परम्पराका बारेमा देख्नु वा सुन्नु भएको छ ? तर यस्तै अचम्मको घटना भएको छ ।
भारतको छत्तीसगढको कोरबा जिल्लामा एक महिलाले कुकुरसँग विवाह गरेर संसारभार भाइरल बनिरहेकी छिन् । कोरबा जिल्लामा आदिवासी मुन्डा समाजमा एक अनौठो परम्परा चल्दै आइरहेका कारण उनले यो परम्परालाई नै निरन्तरता दिएको बताइन्छ ।
कुकुरलाई खानेकुरा दिएर उक्त रात जाग्राम नै बसेर कुर्ने प्रचलन छ । दुलाहा दुलहीको रेखदेखको जिम्मवारी समाजले नै गर्ने परम्परा
खासमा यो काम ति महिलाले ग्रह दोष मेटाउनको लागि कुकुरसँग विवाह गरेकी हुन् । मकर संक्रान्तिको अर्को दिन साना बच्चासहित पाँच वर्षका ८ बच्चाको विवाह गर्ने परम्परा रहीआएके छ । जहाँ दुलहा र दुलहीको रुपमा कुकुरको बच्चा राख्छन् र गीता पाठ गर्ने प्रचलन छ ।
जहाँ कुकुरलाई खानेकुरा दिएर उक्त रात जाग्राम नै बसेर कुर्ने प्रचलन छ । दुलाहा दुलहीको रेखदेखको जिम्मवारी समाजले नै गर्ने परम्परा छ । यो परम्परा निभाउँदा बच्चामा भएका सबै नराम्रा ग्रह दोष मेटिने बिश्वास स्थानीयले गरेपनि पछिल्ला दिनमा यसको विरोध पनि हुँदै आइरहेको छ ।